Buug-gacmeedka Android, hagaha aasaasiga ah ee bilowga iyo tallaabooyinka ugu horreeya | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Tababarada
Haddii aad raadisay a buugga android oo la helay qoraalkan, ugu horreyntii, soo dhowow. Waxaad halkan ugu timid labo ikhtiyaar oo suurtogal ah. Ama waxaad ka mid tahay "weirdos" oo diidey haysashada taleefanka casriga ah oo aad ugu dambeyntii go'aansatay inaad casriyaynayso, ama waxaad ka timid nidaam kale oo aad ku shaqeyso oo aad rabto inaad qaado tallaabada loo qaadayo Android, nidaamka hawlgalka mobilada ee heer sare ah. Waxaa laga yaabaa inaad wali kujirto marxalad raadin oo aad xiiseyneyso inaad ogaato sida wax waliba u shaqeeyaan. Inbadan iyo ka badan ayaa tilaabada qaadaya, iyo waxyaabo kale maxaa yeelay waxay dareemayaan xoogaa inay ka go'een inta kale.
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa ugu dambeyntii go'aansaday inay "dhex maraan hoop" oo aad iibsato casriga casriga ah ee Android ayaa kuu sheegaya inaadan ka qoomameyn doonin. Maanta waan ku wehelinaynaa talaabo talaabo ah iyada oo loo marayo dhammaan dejinta qaabeynta aasaasiga ah ee Android si khibradaadu ay ugu qanciso sida ugu macquulsan. Waxaan ku garab istaagi doonnaa si aan kuu hanuuninno oo aan kaa caawino sidii taleefankaaga cusub uu si buuxda u shaqeyn lahaa. Meel kasta oo aad ka timaadid, waxaan idhi ku soo dhawow Android.
1 Waa maxay Android?
2 Nidaam u furan dhammaan
3 Maxay yihiin lakabyada qaabeynta ee Android?
4 Sida loo sameeyo akoon Google ah
5 Adeegyada Google ee bilaashka ah
5.1 Adeegyada Google ee shaqada
5.2 In aan ku abaabulo
5.3 Jawaabaha su'aalaha
5.4 Madadaalo iyo baashaal
6 Qaabeynta aasaasiga ah ee moobilkaaga Android
6.1 Sida luuqadaada loogu dejiyo Android
6.2 Sida loo dejiyo qalabkaaga Android sida "aalad cusub"
6.3 Xulo shabakad wifi ah oo loogu talagalay casriga casriga ah ee Android
6.4 Sida loogu galo akoonkeena Google.
6.5 Sida loogu daro akoon emayl kale
6.6 U habee nidaamka amniga iyo furaha barnaamijka 'Android'
7 Sida loo ogaado haddii nidaamka qalliinka ee Android uu yahay mid casriyeysan
8 Sida loo soo dajiyo barnaamijyada Android
9 Sida loo rakibo ama looga masaxo barnaamijyada ku shaqeeya Android
10 Barnaamijyada muhiimka ah ee ku saabsan Android
10.1 shabakadaha bulshada
11 Codsiyada waxtar u leh taleefankaaga casriga ah
12 Amniga Android
13 Sida loo kaydiyo xogtayda ku jirta Android
14 Sida xogtayda loogu wareejiyo Android-ka iPhone
14.1 Google Drive ee macruufka
14.2 Sawirrada Google ee loogu talagalay iOS
14.3 Dhaqaaq Xiriirada Transfer / kaabta
15 Waxaad hadda diyaar u tahay inaad naftaada ku quusto adduunka Android
Waa maxay Android?
Haddii aad ku cusub tahay adduunkan casriga ah, ka qayb geli mayno loollan weligiis ah. Waa inaad taas ogaataa Android waa nidaamka hawlgalka mobilada ee Google. Oo maxaa ku saabsan nidaamka hawlgalka ee qalabka mobilada inta badan laga isticmaalo adduunka. Tiradaada hada ee isticmaaleyaasha firfircoon ee dhawan la dhajiyay ka badan laba bilyan. Waxba ma jiraan. Maantana waxay si gaar ah ula tartameysaa nidaamka hawlgalka Apple, oo ka badan labanlaab tirada dadka isticmaala. Waxaan dhihi karnaa taas Spain waa wadan Android ah maaddaama in ka badan 92% taleefannada casriga ah ee waddankeennu ku shaqeeyaan nidaamka cagaaran ee cagaaran.
In 2017 Android 10 sano ayaa laga joogaa markii la bilaabay. Si firfircoon uga shaqeynaya tan iyo 2008 aaladaha mobilada, kiniiniyada, iyo dhawaanahan kuwa xiran. Waxaa lagu abuuray taageerada dhaqaale ee Google shirkada softiweerka "Android Inc.", taas oo aakhirka ku dambayn doonta inay hesho Google sanadkii 2005. Aabihiis oo la aqoonsan yahay, Andy Rubin, oo ay weheliyaan koox injineero ah oo la xulay oo loogu talagalay inay abuuraan nidaam ku saleysan Linux. Sidan ayey ku soo shaac baxday nidaamka hawlgalka ee Android.
Nidaam u furan dhammaan
Faa'iidooyinka uu nidaamkani ku shaqeynayo ka helayo nidaamka Apple ee iOS ayaa ah inuu yahay nidaam furan. Soo-saare kasta ayaa adeegsan kara oo la qabsan kara qalabkooda. Y horumariye kasta wuxuu abuuri karaa codsiyo isku mid ah mahadsanid xirmo ay Google ku bixiso bilaash ahaan. Marka la soo koobo, si aad ugu adeegsan karto si xor ah wixii loogu tala galay. Nidaam hawlgal ah oo loogu talagalay aaladaha casriga ah ee la taabto In sidan, nooc kasta oo sameeya taleefannada casriga ah, leh liisanka Google ee qasabka ah, waxaad u isticmaali kartaa Android nidaamka qalliinka. Apple kee, tusaale ahaan, ma sameeyo. Waqtigan xaadirka ah waa isbeddel in xitaa soo saarayaasha isticmaalay OS-kooda gaarka ah, sida BlackBerry tusaale ahaan, ay ku dambeeyeen inay u hoggaansamaan nidaam caalami ah.
Android waa a nidaamka hawlgalka ee ku saleysan qaab dhismeedka dalabka. Kuwa ugu waaweyn, oo loo arko inay aasaasi u yihiin shaqadooda, ayaa lagu daraa sida caadiga ah nidaamka hawlgalka laftiisa. Nidaam lagu dhisay naqshad dhisme loogu talagalay in lagu fududeeyo dib u adeegsiga qaybaha. Marka, codsi kastaa wuu isticmaali karaa agabyada aaladda, waxaana beddeli kara adeegsadaha. Mar dambe ayaan ka hadli doonaa codsiyada, rakibiddooda waxaanan ku siin doonaa xoogaa tilmaamo ah.
Maxay yihiin lakabyada qaabeynta ee Android?
Sidii aan u sharraxnay, ficil ahaan dhammaan soo-saarayaasha hadda jira waxay adeegsadaan nidaamka Google si ay u keenaan aaladooda nolosha. Oo waxaa jira shirkado qaar oo, iyagoo ujeedkoodu yahay inay ka soocaan kuwa kale, isticmaalaan waxa loogu yeero lakabyada shaqsiyadeed. Waxay noqon laheyd, lagu sharaxay qaab garaaf ah, sida "Dhar" nidaamka Android dharka kale. Nidaamka qalliinka weli waa isku mid, laakiin muuqaal ahaan wuu ka duwan yahay. Sawirka ay muujineyso wuu ka duwan yahay kan Google abuuray. Halkan heerka hagaajintu wuxuu ciyaaraa door aasaasi ah taas ayaa lagu gaadhay galinta lakabka Android.
Waxaa jira shirkado, sida Sony, oo quseeya lakabyada habeynta qalalaasaha badan, xitaa xaddidaya marinnada qaabeynta qaarkood xaaladaha qaarkood. Noocyada sida Xiaomi, oo nuqul ka mid ah nidaamka qalliinka, oo loo yaqaan MIUI, ay dib u eegis aad u wanaagsan uga helaan adeegsadayaasheeda. Waxaana jira kuwa kale ee doorta inay bixiyaan "nadiif ah" Android, nadaafad badan oo laysku habeyn karo.
Si aad u dhadhamiso midabada. Laakiin waxaan taageersanahay Android aan xad lahayn oo aan "isqarin". Tan iyo mararka qaarkood lakabyadani waxay sababaan durba dheecaan iyo nidaam si fiican u shaqeynaya oo ku dhaca gaabis aan loo baahnayn.
Sida loo sameeyo akoon Google ah
Waxaa laga yaabaa inaadan haysan taleefannada gacanta ee casriga ah ee loo yaqaan 'Android Smartphone', laakiin aad ayey macquul u tahay inaad haysato cinwaan emayl "gmail" ah. Haddii aad horey u haysatay, tani waxay noqon doontaa aqoonsigaaga inaad awood u leedahay inaad adeegsato dhammaan adeegyada Google. Haddii aadan wali abuurin koontadaada Google, waa inaad sameysaa kahor intaadan bilaabin qaabeynta qalabkaaga. Si tan loo sameeyo uma baahnid wax ka badan laba daqiiqo. Buuggan Android-ka ah waxaan ku sharaxeynaa wax walba. Nidaamku wuxuu lamid yahay sameynta akoon emayl maxaa yeelay adiguba taas waad sameyn doontaa. Dhibaatada kaliya ee aad ka heli karto ayaa ah in qof horeyba u isticmaalay magaca aad rabto. Haddii kale, oo ay ku jiraan taxane ah macluumaadka shakhsiyeed, waxaad isla markiiba yeelan doontaa aqoonsigaaga Google laakiin haddii aad wax shaki ah qabtid, halkan waxaan ku sharaxeynaa tallaabo tallaabo iyo siyaabaha kala duwan ee abuuro koonto google.
Markii laguu aqoonsado waxaad diyaar u tahay marin dukaanka ugu weyn ee app-ka waxaa ku yaal, ah Play Store. Si la mid ah, waad awoodaa isticmaal qalabkaaga Android dhammaan adeegyada ay bixiso Google lacag la’aan. Sida caadiga ah, dhammaantood waa barnaamijyadaas qalabkeennu horey u sii rakibay. Waxay kuxirantahay astaanta aaladda, waxaa laga yaabaa inay weheliyaan qaar ka mid ah shirkadda iska leh sida kuwa muusikada, iwm.
Adeegyada Google ee bilaashka ah
Google ayaa dhab ka ah nolosheena in loo fududeeyo. Oo na siiya qalab taxane ah oo aan sida ugu wanaagsan uga faa iideysan karno taleefannada casriga ah habka ugu raaxada badan. Way badan yihiin oo way kala jaad duwan yihiin oo waxaan ku kala sooci karnay qaybo ka mid ah noocyada adeegyada ay Google ku bixiso bilaash. Tilmaamahayaga Android waxaan ku soo xulnay kuwa ugu badan ee kuugu deeqi kara marka hore.
Adeegyada Google ee shaqada
Qeybtaan waxaan ka faa'iideysan karnaa
Dukumiintiyada Google, a Tifatiraha qoraalka khadka tooska ah taas oo aan ku saxi karno isla markaana kula wadaagi karno dukuminti kasta meelkasta oo aad joogto.
Waraaqaha Google taasi waa, warqad-xisaabeed, laakiin ciyada oo ay suurtogal tahay in lala wadaago, iyadoo loo soo bandhigayo dadweynaha in wax laga beddelo mid ama in ka badan, lana adeegsado meel kasta.
Bandhigyada Google, waxa kuugu dhow ee aad ku ogaan doontid "xoog barta". Barnaamij aad u fududa in la isticmaalo si loo sameeyo loona ciyaaro bandhigyadaada.
Google Drive, meel "aamin ah" oo lagu xafido nuqul faylashaada ah inta badan dukumiintiyada la isticmaalay, xitaa xogta arjiga.
In aan ku abaabulo
Google sidoo kale waxay na siineysaa fursad aan ku noqono dad abaabulan. Waxaadna ku haysaa waxyaabaha ugu qiimaha badan taleefannada casriga ah meel kasta oo aad joogto. Markaa waxaan ku heli doonnaa awoodeena
Sawirrada Google, taas oo aan u adeegin oo keliya abaabulka qabashadayada. Si otomatig ah album ugu samee taariikho ama goobo. Intaa waxaa dheer in naloo fidinayo ilaa 15 GB oo keyd ah si sawiradu aysan ugu banaaneyn qalabkeena.
Xiriirrada Google waxay naga dhigeysaa inaanan waligeen ka baqeynin bedelida taleefannada sababtoo ah luminta nambarada keydsan, ama inaan gacanta ku dhaafno Isku xir xiriirada akoonkaaga Google waxayna noqon doonaan meel kasta oo aad isku aqoonsato.
Google Calendar, kaalandarka Google si aanad waxba u ilaawin, iyo in wax walba la qoro. Ogeysiisyo, xusuusin, digniin, waxba kaa baxsan maayaan.
Maxaan u dooneynaa taleefan casri ah haddii aanan wax weydiisan karin, sax? Inaad leedahay Google ku taabo gacantaada waa faa iido. Iyada oo horay loo soo rakibay widget-ka Google waxaan ku weydiin karnaa in aan Google kala hadalno wax walba. Ama raadi oo dhex mar barnaamijkeeda caanka ah ee biraawsarkaaga. cadow
Google Chrome si aad u raadiso una dhex mariso barnaamijka caanka ah ee biraawsarkaaga
Khariidadaha Google. Haddii aad rabto inaad ogaato halka ay wax ka jiraan ama sida loo tago, kan weyn ee "G" ayaa halkaa u jooga inuu kaa caawiyo isla markiiba. Google kaaama tagi doono meelkasta oo aad joogto.
Google turjumi, Meelkasta oo aad joogtid, luuqadu sidoo kale caqabad kuguma noqonayso adiga.
Madadaalo iyo baashaal
Taleefanka casriga ahi wuxuu u eg yahay qaar badan oo isku mid ah iskudhaca. Hadana waa sidaa, kulligeen waan ku nafisnay waqti wakhti sugitaan dheer. Waxa kale oo jira kuwa u adeegsada taleefankooda Android xarun ay ku maaweeliyaan multimedia. Tan awgeed waxaan ku raaxeysan karnaa tiro badan oo codsiyo ah.
YouTube. Barxadda fiidiyowga qulqulka ah ee heer sare ah. Daaro fiidiyowyada aad jeceshahay, la wadaag ama soo dheji taada.
Muusikada Google Play gacantaada ayuu galiyaa ciyaartoy warbaahin karti badan leh. Oo lagu daro ka ciyaaro music ka qalab aad, waxaad heli kartaa hits ugu dambeeyay ee xilligan. Ama ka iibso albamkii ugu dambeeyay fanaanka aad jeceshahay.
Filimada Google Play Sida muusikada oo kale, u hel wararkii ugu dambeeyay ee filimada, bandhigyada TV-ga ama taxanaha.
Kuwani waa adeegyada ugu caansan, laakiin Google ayaa ku siinaya wax intaa ka sii badan. Sidaad aragtay, adduun dhan oo ah fursadaha qalabkaaga Android. Ma ka warqabtay wax kasta oo kaa maqnaa? Xaqiiqdii kama qoomameysid inaad iibsatay casriga casriga ah ee Android. Hadana hadaadan wali iibsan, markaad dhameyso aqrinta qoraalkan hubaal waad ku qanci doontaa.
Qaabeynta aasaasiga ah ee moobilkaaga Android
Miyaad hore u iibsatay? Hambalyo. Haddii aad ugu dambeyntii gacantaada ku haysato qalabkaaga cusub ee Android waa waqtigii la diyaarin lahaa. Buuggan Android-ka ah waxaannu kugula socon doonnaa tallaabo-tallaabo si aad u fuliso qaabeynta bilowga ah. Ka dib markaad ka saarto telefoonkaaga cusub sanduuqa, waa inaan marka hore ku dar kaarkeena SIM. Iyo cabsi la'aan, riix badhanka awoodda si aad u bilowdo qaabeynta.
Sida luuqadaada loogu dejiyo Android
Waa waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno markaan daarinno qalabkeenna cusub ee Android. Kadib dhambaalka soo dhaweynta dublamaasiyadeed ee uu nagu salaamayo waa inaan doorannaa luqadda aan kula macaamili doonno xilligaas casriga casriga ah. Liisaska ballaaran ee luqadaha waxaan ku xuli doonnaa midka ku habboon, waana intaas.
Haddii waqti kasta aan dooneyno inaan bedelno luqadda lagu xushay qaabeynta bilowga ah waxaan ku sameyn karnaa si fudud. Uma jiheyn doonno liiska menu ee taleefannada casriga ah «Dejinta». Halkanna, sida caadiga ah gudaha u gala "Dejinta horumarsan" waa inaan raadino ikhtiyaarka "shaqsiyeed". Laga soo bilaabo goobtan, adoo gujinaya "Luqadda iyo qoraalka la gelinayo" Waxaan heli karnaa liisaska luqadaha oo waxaan u beddeli karnaa midka aan dooneyno.
Sida loo dejiyo qalabkaaga Android sida "aalad cusub"
Noocyadii ugu dambeeyay ee la heli karo ee dalab Android ah ikhtiyaarrada qaabeynta cusub ee loogu talagalay marka aan soo bandhigno casriga. Sidaa darteed, haddii ay dhacdo in taleefanka cusub ee la iibsaday uu u adeego inuu cusbooneysiiyo mid hore, waxaan u fududeyn doonnaa. Laga soo bilaabo halkan, waxaan ku habeyn karnaa telefoonka cusub ikhtiyaarro la mid ah kii hore. Xitaa iyadoo la adeegsanayo isla barnaamijyadii aan rakibnay, furayaasha Wi-Fi, iwm.
Laakiin tani maaha kiiskayaga hadda. Iyo in lagu sii wado qaabeynta aasaasiga ah waa inaan dooranaa ikhtiyaarka "U samee qalab cusub". Sidan ayaa talaabooyinka iyo dejimaha soo socda lagu soo gali doonaa markii ugu horeysay. Haddaba aan u gudubno tallaabada xigta.
Xulo shabakad wifi ah oo loogu talagalay casriga casriga ah ee Android
In kastoo tallaabada xulashada shabakadda Wi-Fi looma baahna si buuxda si loo dhamaystiro dejinta qalabka cusub. Haddii si weyn loogu taliyo in lagu fuliyo hawlgalladaas xiriir internet. Sidan qaabeynta qalabka ayaa la dhammaystiri doonaa. Liistada shabakadaha Wi-Fi ee jira, waa inaan dooranaa kuweenna. Si aan u sii wadno, ka dib gelitaanka koodhka marin-u-helka, waa inaan doorannaa «sii wado»
Waa wax caadi ah in la isticmaalo in ka badan hal shabakad Wi-Fi maalintii oo dhan. Sababtaas awgeed, iyo inaad isku dari karto dhammaan shabakadaha aad u baahan tahay, ayaan kuu sharraxeynaa sida loo sameeyo wakhti kasta oo kale. Waxaan marin u helnaa astaanta mar kale «Dejinta» qalabkeenna dooro ikhtiyaarka «Wifi ". Markii aan hawlgalinay isku xidhka Wi-Fi waxaan awoodi doonnaa inaan ku aragno liistada shabakadaha la heli karo. Sifudud waa inaan doorannaa shabakadda la rabo oo aan galnaa lambarka marin u helka. Qalabkayagu wuxuu si otomaatig ah ugu xirmi doonaa shabakadaha la keydiyay markaan ku jirno caymiskiisa.
Sida loogu galo akoonkeena Google.
Waxaan u qaadaneynaa inaan horey u haysanay koonto Google ama aan abuurnay iyadoo la raacayo tilmaamaha kore. Helitaankeeda iyo inaad ku raaxeysato dhammaan adeegyada ay bixiso koontadeena waa mid aad u fudud. Waxaan si fudud u yeelan doonaa noo aqoonso koontadayada "xxx@gmail.com" oo gal lambarkayaga sirta ah. Marka tan la sameeyo, waa inaan aqbalnaa shuruudaha adeegga si aan ugu sii wadno tallaabada xigta.
Sidoo kale waa suurtagal in lagu sii wado qaabeynta adigoon haysan xisaab "gmail" ah. Laakiin markale waxaan kugula talinaynaa inaad iyada la sameyso. Qaabkan waxaan si buuxda ugu raaxeysan karnaa xirmada adeegyada ay Google na siiso. Oo sidaas daraaddeed qaabeynta ayaa ka sii dhameystirmi doonta dhinacyada oo dhan.
Sida loogu daro akoon emayl kale
Marka talaabada hore la dhammeeyo, menu qaabeynta ayaa na weydiin doonta haddii aan rabno inaan ku darno xisaab kale oo emayl ah. Halkan waxaan ku dari karnaa inta hartay e-mayllada aan isticmaalno si kalsooni leh. Haddii ay leedahay Google ama hawl wade kasta oo kale. Codsiga Gmail ayaa daryeeli doona abaabulkooda fayl. Waxaad arki kartaa dhammaan waraaqaha isla waqtigaas ama shaqsi ahaan waxaad dooran kartaa sanduuqyada, ladiray, iwm.
Sida shabakadaha Wi-Fi, marka howsha qaabeynta qalabka ay dhammaato, waxaan sidoo kale ku dari karnaa koonto emayl badan inta aan u baahanahay. Tan waxaan u aadeynaa astaanta soo noqnoqota ee «Dejinta» halkee ayaynu ka raadinaynaa ikhtiyaarka "Xisaabaadka". Halkan waxaan ka dooran doonaa "kudar Account" waxaanan galidoonaa magaca koontada, lambarka sirta, iwm. Oo isla markiiba waxay ka muuqan doontaa sanduuqa sanduuqa inta kale.
U habee nidaamka amniga iyo furaha barnaamijka 'Android'
Marka la eego dhinacyadan, xulashooyinka amniga ee qalabkeenu na siin karo ayaa door muhiim ah leh. Taasi waa, waxay kuxirantahay faa'iidooyinka laxiriira ee aad leedahay. Xilligan ku dhowaad dhammaan aaladaha cusub waxay ku yimaadaan qalabaysan faraha akhristaha. In kasta oo ay jiraan telefoonno aan weli ku darsan farsamadan, haddana waxaa jira kuwa haysta iris akhristaha o aqoonsi wajiga.
Haddii qalabkeennu uusan lahayn wax war ah oo ku saabsan nidaamyada amniga waa inaanan ka walwalin. Weli way ka badbaadi kartaa dhinacyada saddexaad haddii aan si wanaagsan u isticmaalno aaladaha ay Google na siiso. Waxaan mar walba yeelan karnaa qaab furitaan ama ku samee iyada oo loo marayo a lambar nambar. Tallaabadan waxaan ku dooran karnaa mid uun ama isku dari karnaa midba midka kale. Si uun ama mid kale ayaan markasta kugula talinaynaa inaad mid isticmaasho.
Tani waa talaabada ugu dambeysa ee qaabeynta aasaasiga ah ee qalabkeena, laakiin ugu yaraan muhiim uma ahan taas. Markaan dooranay nidaamka amniga, taleefannadeenna casriga ahi waa diyaar. Dejintani badanaa waa isku mid ficil ahaan dhammaan qalabka Android. Laakiin amarku wuu isbeddeli karaa iyadoo ku xiran lakabyada qaabeynta iyo nooca nidaamka hawlgalka ee aan haysano.
Iyada oo ku saleysan meeshayaga, waxaan dooran doonaa aaga waqtiga ku habboon. Halkaas waxaan ka hubsan karnaa in waqtiga uu aaladdu muujisay uu sax yahay.
Hadda haa, waxaan ku raaxeysan karnaa qalabkeenna cusub awood buuxda. Laakiin marka hore, waxaan ku siin karnaa xoogaa taabasho shaqsiyeed. Shaki la'aan waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto nidaamkan qalliinka, suurtagalnimada in la siiyo muuqaal aan ugu jecel nahay. Laga soo bilaabo qaabeynta aasaasiga ah ee qalabka waxaan dooran karnaa mawduuca, codadka ama farriinta in aan aad u jecel nahay. Isaga oo kale gidaarka qufulka ama isticmaalka shaashadda. Ama xitaa midabada LED-yada ogeysiiska ee kuxiran ogeysiis kasta.
Sida loo ogaado haddii nidaamka qalliinka ee Android uu yahay mid casriyeysan
Xisaabinta codsiyada badan ee horay loo sii rakibey ee Google na siiso, Smartphone horeyba wuu u shaqeynayaa hawl kasta. Laakiin Kahor intaadan bilaabin rakibida codsiyada dibedda, waxaa xiiso leh in la hubiyo in barnaamijkeennu uu cusbooneysiiyay. Si tan loo sameeyo, gudaha qalabka qalabka ayaan tagi doonnaa "Dejinta". Waxaan eegi doonaa ikhtiyaarka "Ku saabsan qalabkeyga" waanan gujin doonaa. Marka ikhtiyaarkan la furo waa inaan dooranaa "Raadi warar cusub" (ama ikhtiyaar aad u la mid ah). Taleefanka laftiisa ayaa hubin doona haddii uu leeyahay wax cusbooneysiin ah oo sugaya in la rakibo.
Haddii uu jiro cusbooneysiin sugaya, waxaan si fudud u gujineynaa "Soo dejiso oo rakib" oo isla markiiba soo dejinta ayaa bilaabmi doonta, taas oo si otomaatig ah loo rakibayo. Nidaamkani wuxuu qaadan karaa daqiiqado yar telefoonkeenuna wuu cusbooneysiin doonaa. Ogow taas ma awoodi doontid inaad ku soo dejiso cusbooneysiin wax ka yar boqolkiiba konton batari.
Talo ahaan, waa ku habboon in lagu sameeyo qalliinkan oo leh xiriir wifi ah. Maaddaama laga soo dejinayo cusbooneysiinta nidaamka hawlgalka waxay kordhin kartaa isticmaalkayaga xogta si xad dhaaf ah.
Nidaam casriyeysan oo casri ah ayaa had iyo jeer ka ammaan iyo waxtar badan. Ku-hagaajinta qalabka shaqadiisa iyo barnaamijyadeeda had iyo jeer way ka fiican tahay nooca ugu dambeeyay ee la heli karo. Inaad sida ugu dambeysa ula socoto waxay kaa hor istaageysaa inaad la kulanto dhibaatooyin u dhigma dalabka, xitaa isticmaalka batteriga way fiicnaan kartaa
Sida loo soo dajiyo barnaamijyada Android
Hadda haa. Telefoonkeena casriga ahi wuxuu diyaar u yahay inuu helo codsiyada. Waxaan hadda soo dejisan karnaa oo rakibi karnaa codsiyo badan inta aan rabno. Talada ugu weynna waa inaan sameyno ka socota dukaanka rasmiga ah, Google Play Store. Dhexdeeda waxaan ka heli doonnaa ku dhowaad hal milyan oo codsi ah oo ku saabsan adeegyadeena oo loogu talagalay wax kasta oo aan ka fekeri karno Kaliya waa inaan riixnaa astaanta Play Store ee horay loogu sii rakibay si aan caadi aheyn waana heli karnaa.
Lagu kalasaaray qaybaha aan ka heli karno, tusaale ahaan, madadaalo, qaab nololeed, sawir qaadis, waxbarasho, isboorti, iyo wixii la mid ah in ka badan soddon doorasho. Waxaan dooran karnaa inaan ka dhex raadino kuwa ugu caansan, ama raadino ciyaaro, filimo, muusig. Ikhtiyaarro aan dhammaad lahayn oo sida xaqiiqada ah aan ku heli doonno dalabkii aan dooneynay.
Si aad ugu rakibto codsi qalabkeena, waxa ugu horeeya waa inaad gasho Play Store. Markaad gudaha gasho, markaan helno dalabki la rabay, waa inaad kaliya dhagsii. Markii aan fureyno, waxaan arki karnaa macluumaadka la xiriira waxa ku jira, waxaan arki karnaa shaashadda App-ka laftiisa, iyo xitaa akhrinno faallooyinka oo aan aragno qiimeynta isticmaalaha Iyo sidoo kale hubinta in arjigu yahay lacag la’aan ama lacag la siiyay.
Sida loo rakibo ama looga masaxo barnaamijyada ku shaqeeya Android
Haddii aad na qancisay, kaliya waa inaan gujino "rakib". Codsiga ayaa si otomaatig ah u bilaabi doona inuu soo dejiyo oo uu isku rakibo qalabkeena. Oo markii rakibida la dhammeeyo, codsigu wuxuu kumbuyuutar ku abuuri doonaa astaan ​​cusub. Si loo furo loona isticmaalo, waa inaan si fudud u gujino astaanteeda. Ma aragtaa sida ugu fudud? Ma fududaan karin soo degsashada iyo rakibidda codsi.
Laakiin, Kawaran haddii aanan jeclayn barnaamijka aan soo dejiyey? Dhib ma leh, waxaan sidoo kale iyaga si fudud u tirtiri karnaa. Hal ikhtiyaar ayaa noqon kara inaad aado "Dejinta". Halkaan ayaan ka xulannaa "Codsiyada" oo waxaan arki doonaa liiska codsiyada la rakibay. Adoo gujinaya arjiga aan dooneyno inaan ka tirtirno, waxaa soo muuqanaya menu aan ku dooran karno "Uninstall". Ama, waxay kuxirantahay nooca Android ee aan isticmaalno, adigoo riixaya oo haya codsi kasta, iskutallaab ayaa ka muuqata mid kasta oo iyaga ka mid ah. Oo adigoo gujinaya iskutallaabta, dalabka sidoo kale waa laga saari doonaa.
Barnaamijyada muhiimka ah ee ku saabsan Android
Waad ku mahadsan tahay xulashooyinka badan ee Play Store na siiya, taleefan casri ah oo kasta wuu ka duwan yahay kan kale. Qalabkaagu wax badan buu kaa sheegaa. Markaad fiiriso codsiyada aan rakibnay waxaan ku ogaan karnaa waxa dhadhankeena iyo dookheennu yihiin. Isboortiga, ciyaaraha, muusikada, sawir qaadista. Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aan soo dejin karno oo ay adag tahay in la sameeyo xulasho qancinaysa qof walba.
Laakiin sidaas oo ay tahay, waanu ku heshiin karnay aqlabiyadda badan taxane ah codsiyada "aasaasiga ah"”. Waxaanan kula talinaynaa kuwa nalagu talinayo. Dhexdooda waxaan ka xulanay kuwa ugu caansan waax kasta. Markaad rakibto waxaad awoodi doontaa inaad ka faa'iideysato taleefankaaga cusub ee Android.
Codsiyada shabakadaha bulshada waa ah "abc" ee barnaamijyada la soo dejisto ee casriga ah. Wayna ka sarreeyaan nidaamyada hawlgalka, noocyada iyo moodooyinka. Marka ma iska indho tiri karno codsiyada qaddarinaya saacadaha ugu badan ee la isticmaalo. Telefoonada casriga ah ayaa ficil ahaan aan la fahmi karin iyadoo aan la adeegsan barnaamijyadan. Way wada noolyihiin midba kan kale.
Waxaa loo tixgeliyaa sida shabakadaha shabakadaha, Waxaan kuu sheegi karnaa wax yar oo aan laga aqoon shabakadan bulshada. Xaqiiqdu waxay tahay haddii aad go'aansatay inaad u beddelatid taleefannada casriga ah oo aanad wali haysan xisaab Facebook ah, waa markan.
Mid kale oo ka mid ah shabakadaha bulshada ee lagama maarmaanka u ah inay xiriir la yeeshaan adduunka. Asal ahaan waxaa looureeyay adeeg microblogging. Oo loo beddelay mahadsanid adeegsigeeda, iyo dabcan adeegsadayaasheeda qalab isgaarsiineed oo dhab ah. Shakhsiyaadka, mas'uuliyiinta, warbaahinta xirfadleyda iyo hiwaayadda waxay si isku mid ah ugu darmaan is biirsaday macluumaad iyo ra'yi aynaan iska indhatiri karin.
Shabakada bulshada ee loogu talagalay dadka jecel sawir qaadistaku. Mise sidan ayey ku timid taleefannada casriga ah markii ugu horreysay. Hadda loo beddelay madal awood badan taas oo lagu ogaanayo dadka, sawirada, sheekooyinka iyo xitaa shirkadaha xiisaha leh. Instagram kama maqnaan karo Smartphone cusub oo Android ah.
Wadahadalku waa hadafka koowaad ee telefoonkaama, ha ahaato mid caqli badan ama aan caqli lahayn. Oo sidaan ognahay, qaabkeenii isgaarsiinta ee hada waa is badalay. Way adag tahay in wax wicitaanno ah mar dambe la sameeyo. Iyo taleefanka gacanta ee casriga ah ee gacanta ku jira, gabi ahaanba waa qasab in la rakibo ugu yaraan laba ka mid ah.
Es barnaamijka fariimaha ugu soo dejinta iyo adeegsiga badan adduunka. Yaan isticmaalin WhatsApp maanta? Xitaa waxaa jira shirkado qaar oo ku daraya codsigan, kuwaas oo aan ka helno horay loo rakibay. App aasaasi u ah inuu adduunka ka jiro
Waxaa loo arkaa inay yihiin "kan kale" dad badan. Laakiin loo doortay si ka wanaagsan WhatsApp isbarbardhiga aan la tirin karin. Nuxurkeedu wuxuu lamid yahay kan ay xifaaltamaan. Laakiin leh a shaqo joogto ah oo ku saabsan cusbooneysiinta iyo hirgelinta hawlo kala duwan waxay maamushaa inay noqoto mid aad ugafiican WhatsApp.
Codsiyada waxtar u leh taleefankaaga casriga ah
Barnaamijyada aan soo sheegnay waa kuwa aad ku arki doontid ku dhowaad dhammaan taleefannada gacanta ee maanta shaqeeya. Laakiin baaxadda weyn ee Google Play Store waxaa ku yaal qolka waxyaabo badan oo dheeraad ah. Waxaana jira codsiyada kuu adeegi kara waxa aad u baahan tahay oo keliya. Barnaamijyo shaki la'aan waxay ku siin doonaan casrigaaga hal dhibic oo dheeri ah oo faa'iido leh iyo shaqeynta.
Sidaa darteed, hoosta waxaan kugula talineynaa qaar ka mid ah codsiyada aan aad u jecel nahay iyo in dabcan aan maalin walba isticmaalno. Dad badan, taleefannada casriga ahi waa nooc kale oo isgaarsiineed iyo madadaalo ah. Laakiin kuwa kale oo badan sidoo kale waa aalad shaqo oo faa'iido leh oo wax badan naga caawin karta.
Meel lagu wada hayoSidan ayaa codsi isku qeexayaa kaa caawin kara wax badan si aad u habaysato. Loogu qaatay sidii buug xusuus qor ah laakiin taasi wax badan ayey u adeegaysaa. Waad keydin kartaa sawiro, feylal, cajalado, ama qoraal. Waxay u adeegtaa xusuusin ballamaha ama howlaha la qabanayo. Mid ka mid ah codsiyada ugu dhammaystiran ee xafiiska ama waxyaabahaaga taasna way isbeddelay inta badan.
Maxaa cusub oo waxtar u leh codsigan waa intaas waxaad u isticmaali kartaa qalab kasta oo aad ka mid tahay. Oo waxaad had iyo jeer iyaga ka waafajin doonaa isku mar. Marka uma baahnid inaad ka walwasho raadinta qoraal ku saabsan taleefankaaga ama kaniinigaaga. Waxa aad ku qortid Evernote waxay ku xirnaan doonaan dhammaan qalabka aad isticmaasho. Mid ka mid ah App-ka ugu waxtarka badan waxaad ka heli doontaa.
Evernote - Qoraallada Abaabulaha & Qorsheeyaha Maalinlaha ah
Kuwa kale qalab weyn oo loogu talagalay abaabulka shaqada. Ku habboon in la sameeyo shaqooyinka kooxda. Abuur guddi lana wadaag cidkasta oo aad ubaahantahay inaad lashaqeyso. Waad awoodaa samee liisas ku yaal tiirarka muuqaal badan. Y iyaga kaararka ka buuxi, tusaale ahaan, ka-to-dos. Kaadhadhkan waxaa si fudud loogu jiidi karaa tiir ilaa khaanad, tusaale ahaan laga soo bilaabo to-dos ilaa hawlihii la dhammaystiray.
Haddii aad xafiis ama hawlo la wadaagto koox, kama fekeri karno hab wax ku ool ah oo waxtar leh oo aad isku abaabuli karto. La wadaag guddigaaga asxaabtaada. J) Haa qof walba wuxuu heli doonaa macluumaad casriyeysan oo ku saabsan shaqada sugeysa iyo dhameystirka. Codsi aad loogu taliyay.
Trello: U abaabul waxkastoo qof ah, meel kasta!
Mid ka mid ah codsiyada marwalba ku guuleysta meel ka mid ah kuwa aan ugu jecel nahay. Iyadoo halkudheggeedu yahay Keydso hadhow, waxay naga caawineysaa inaanan u seegin wax kasta oo xiiso noo noqon kara. Ku rid "jeebkaaga" oo akhri markii aad waqti hesho. Waad keydin kartaa maqaalada iyo wararka aan xadidneyn. Xitaa waad dalban kartaa iyaga sida kuugu habboon adiga. Shaki la'aan waa qalab loogu talagalay kuweenna aan joogsan. Taasina waa mid aad waxtar u leh inaan la seegin qodob muhiim noo ah. maxaa runtii na daneynaya.
Jeebku waa waxtar sida ay u fududahay in la isticmaalo. Kaydinta daabacaadda "jeebkaaga" waa deg deg iyo fudeyd. Ka dib rakibida Pocket-ka waxaa ku jira kordhin leh astaanteeda. Isticmaalka ikhtiyaarka saamiga waxaan ku keydin karnaa jeebka si otomaatig ah. Anaguna waa inaan helnaa kaliya arjiga si aan u raadino wax walba oo aan rabay inaan keydino hadhow. Fikrad weyn oo wax weyn naga tari karta.
Jeebka: Keydso. Akhriso. Kordhi.
Developer: Shirkadda Mozilla
Codsigan waxaa loogu talagalay fikrad aad ugu eg Pocket. In kasta oo ay ku jiraan noocyo kale oo warbaahin ah. Adduunyada Podcast kasbato tiro aad iyo aad u tiro badan iyada oo ay ugu wacan tahay nooca noocan ah. Kaftan, madadaalo, dhaqan ama barnaamijyo muusig. Wax walba waxay ku habboon yihiin iVoox. Madal aad u weyn oo aad u habaysan oo aad ku dhageysan karto barnaamijka raadiyaha aad ugu jeceshahay markasta oo aad rabto.
Haddii aadan waligaa dhagaysan karin barnaamijka raadiyaha ee aad ugu jeceshahay, fursadaha ayaa ah inay horeyba uga jirtay iVoox. Waad iska qori kartaa qoraallo kala duwan. Sidan ayaad ku ogaan doontaa goorta ay jiraan waxyaabo cusub oo la xiriira dhadhankaaga iyo barnaamijyadaada la socda. Wax walba shaqo uma socdaan, sax? Isbahaysi ku habboon waqtigaaga firaaqada.
Podcast & Radio iVoox - Codka aan xad lahayn
Developer: iVoox Podcast y Raadiyaha
Waxaan kugula talin karnaa codsiyada adigoon joojin muddo dheer. Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa aan inta badan isticmaalno oo aan u aragno kuwa ugu faa'iidada badan. Laakiin maaddaama isticmaale kasta uu yahay adduun. Talada ugu fiican ayaa ah inaad ku dhex quusato Play Store oo aad hesho "khasnadahaaga" gaarka ah. Hadaad ubaahantahay codsi wax aamin ah wuxuu kujiraa dukaanka arjiga Google.
Waa caadi in la akhriyo oo la maqlo taas Android maahan nidaam qalliin oo nabdoon. Ama ugu yaraan ma aha boqol boqolkiiba. Qeybna waa run. Waxyaabaha, dhinaca kale, ee ah nidaamka ugu isticmaalka badan adduunka, waa wax iska caadi ah inay tahay tan ugu badan ee lagu weeraro malware. Si aan u ilaalino aaladaheena waxaa jira taxane ah codsiyo iyo antivirus aan gacanta ku hayno oo aan ku xakamayno "nadiifinta" mobilka.
Waa inaad maskaxda ku haysaa taas amniga aaladeenu wax badan ayey ku xiran tahay halista aan u soo bandhigno. Helitaanka boggaga internetka oo leh sumcad shaki leh. Fur emayl shaki leh. Ama xitaa soo dejinta qaar ka mid ah barnaamijyo tayo-yar, oo xayeysiis ah. Sida aan aragno, waxaa jira dhowr nooc oo caabuq ah. Nasiib wanaagse, Android waxay si joogto ah uga shaqeyneysaa hagaajinta amniga. Waxayna baaritaan adag ku sameyneysaa barnaamijyada halista ah ee khatarta ah iyaga oo ka mamnuucaya Play Store.
Maaddaama aan ahay isticmaale firfircoon oo ka tirsan Android tan iyo markii la aasaasay, waa inaan dhahaa weligey dhibaato kama soo gaarin sababtoo ah infekshinka fayraska ee casriga ah. Waana xaqiiqo, sida ay ku dhacdo kumbuyuutar, taasi falanqaynta joogtada ah ee feylasha qalab sameeya barnaamij ama codsi, waxay ku egtahay hoos u dhigida hawlgalkeeda. Sidaa darteed, si looga fogaado dhibaatooyinka feyraska iyadoo aan waxoogaa lumin waxqabadka, taxaddarrada qaarkood waa in lagu qaataa waxyaabaha aan cunno iyo halka ay ka timaaddo.
Laakiin haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ku seexato si nabad ah adigoo og in meel kasta oo aad ka gasho furahaaga sirta ah iyo xogtaadu ay badbaado noqon doonaan, waxaa fiican inaad rakibato codsi antivirus ah. Ikhtiyaar weyn ayaa noqon kara 360 Amniga, Waxaa loo tixgeliyaa Barnaamijka Badbaadada Moobilka ugu kalsoon adduunka. Maaha wax aan micne lahayn waxay leedahay qoraal ka mid ah 4,6 shantiiba dukaanka Play Store. Intaa waxaa u dheer in ka badan laba boqol oo milyan oo soo degsasho ah.
Ammaan Ammaan - Fayras, Kordhiye, Nadiifiyaha Taleefanka
Developer: Kobcinta Amniga Nabdoon
Sida loo kaydiyo xogtayda ku jirta Android
Sida caadiga ah, taleefannada casriga ah ayaa ku jira macluumaad qiimo leh annaga. Mararka qaar qaab farriimo ah, ama sawirro iyo fiidiyowyo ah. Ama xitaa dukumiintiyada shaqada ee ah inaanan lumin. Si dhammaan xogteennu ay ammaan u yihiin shil, ama marin-u-helid dhinac saddexaad ah, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo aaladaha Google ay noo diyaariso.
Thanks to Xiriirrada Google, Sawirrada Google ama Google Drive, waxaan lahaan karnaa xiriiradayada, sawirada, feylasha ama dukumiintiyada si nabad galyo ah iyo meelkasta. Laakiin haddii waxa aan dooneyno ay tahay in la abuuro nuqul ka mid ah aaladda lafteeda, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo. Si loo sameeyo nuqul keydkeena waa inaan furnaa ikhtiyaarka «Dejinta». Waxaan tagnaa goobaha horumarsan oo aan raadineynaa "Shakhsi". Mid ka mid ah dejintu waa "Kaabta".
Doorashadan gudaheeda waxaan haysannaa fursado dhowr ah oo la heli karo. Waxaan nuqulan karnaa xogtayada qalabka laftiisa ama waxaan ku sameyn karnaa koontadeena Google. Tan waa inaan ku ogaano taleefanka casriga ah akoonkeena. Laga soo bilaabo halkan waxaan sidoo kale ku soo celin karnaa goobaha shabakadda, haddii ay dhacdo isbeddel hawlwadeen, tusaale ahaan. Waxaan sidoo kale dib u soo celin karnaa xogta warshadda, haddii ay dhacdo inaan dooneyno inaan gebi ahaanba tirtirno qalabkeenna.
Dhammaan tallaabooyinkii hore ee aan soo sharraxnay waxay noqon doonaan kuwo waxtar badan leh haddii aad ku cusub tahay aaladda Android. Iyaguna waxay ahaan doonaan haddii aad ka horreyso bilowgaaga tan tiknoolajiyada moobiilka. Waxaan isku daynay inaan sameyno hage dhameystiran si aadan lumin waqti kasta. Laakiin Waxay noqon kartaa kiiska in aadan ku cusbeyn dunida casriga ah. Haa haa waxaad ku jirtaa Android.
Marka si hagahan looga dhigo wax badan oo iswaafajin ah, waxaan ku dari doonaa hal talaabo oo dheeri ah. Tani waa sida aan uga dhigi doonno shaqadan soo dhaweynta dhammaan kuwa doonaya inay ku biiraan nidaamka hoggaamineed ee mobilada adduunka. Isticmaalayaasha cusub iyo kuwa ka yimid nidaamyada kale ee hawlgalka. Iyo in ka gudbida mid ka mid ah nidaamka hawlgalka ee loo wareejiyo mid kale aysan keenin wax caqabad ah.
Sida xogtayda loogu wareejiyo Android-ka iPhone
Laga soo bilaabo Google waxay had iyo jeer tixgeliyaan u guuritaanka suurtagalka ah ee Android ee isticmaalayaasha ka socda iPhone. Muddo sanado ahna waxay soosaaraysay codsiyo sahlaya hawsha xogta looga wareejinayo hal madal loona wareego midkale. In kasta oo mararka qaarkood hawshu u muuqato mid caajis iyo dhib badan. Google waxay bixisaa qaar qalab si weyn u fududeyn doona ka-guuritaankan ka imanaya Android illaa xogta macruufka
Google Drive ee macruufka
Mid ka mid ah codsiyada ugu waxtarka badan ee Google ay ku bixiso bilaash iyada oo loo marayo barnaamijka dalabka saxiixa ee tufaaxa. Barnaamijkan waan dhoofin karnaa dhammaan waxyaabaha aan u aragno inay lagama maarmaan yihiin laga soo bilaabo iPhone-kii hore si loogu haysto Android-keena cusub. Oo waxaan ku samayn karnaa adigoo raacaya xoogaa tallaabooyin fudud oo fudud.
Lagu rakibay iPhone, marka lagu daro in loo isticmaali karo qalab ahaan inay tahay, kaydinta iyo ka shaqaynta faylasha iyo dukumintiyada. Waxay kaloo noqon kartaa annaga faa iido badan u leh gudbinta xogteena ka socota macruufka iyo Android. Sidaa darteed, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan kala soo baxno codsigan. Y mar la rakibo on iPhone, isku aqoonsano akoonkeena Google. Xogta waxaa lagu koobiyeyn doonaa koontadan.
Iyadoo Google Drive loogu talagalay iOS lagu rakibay iPhone-ka waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda. Laga soo bilaabo goobaha menu waa inaan doorannaa "Samee gurmad". Waa inaan dooro in xogta lagusoo guuriyo akoonkeena Google Drive taas oo aan horay u soo ogaannay. Marka tan la sameeyo, waxaan dooran doonnaa feylasha kala duwan ee aan dooneyno inaan nuqul ka dhigno sida xiriirada, sawirada, munaasabadaha kalandarka, xitaa wada sheekaysiga WhatsApp. Si fudud, sax?
Markii aan isla barnaamijka ka furano qalabkeena Android, horay loogu rakibay warshadda, waxaan heli karnaa dhammaan macluumaadka la soo guuriyey. Laga soo bilaabo WhatsApp, markaan rakibno, waa inaan ka doorannaa dib u soo celinta nuqul ka mid ah Google Drive si sheekooyinka loo kaydiyo. Waxaan sameyn doonaa isla si aad u soo ceshano xiriirada, kalandarka, iwm.
Sawirrada Google ee loogu talagalay iOS
Xaddidaadda Google Drive waxaan ogaan karnaa in keydka ay na siiso uusan ku filnayn. Sida caadiga ah, boqolkiiba ugu badan ee shaqeynta xusuusta ee Smartphone u dhiganta sawirrada. Waana kuwan kuwa kaydinta ka dhigaya mid isku dhex yaacsan.
Si la mid ah sida aan u haysanno Dukaanka Apple App ka socota Google Drive, dhawaan sidoo kale waxaan kala soo bixi karnaa Sawirada Google. Iyada oo aan la tixgelin karin 15 GB oo laga heli karo bilaash, waxaan si weyn u yareyn karnaa shaqeynta keydinta qalabkeena. Iyo si la mid ah, waxaan kuugu haynaa dhamaan sawirada iyo fiidiyowyada isla markiiba ku saabsan taleefanka casriga ah ee Android.
Inkastoo had iyo jeer waxaan kugula talineynaa barnaamijyada Google ee ugu horeeya xalinteeda iyo shaqeynteeda la xaqiijiyay. Waxaan sidoo kale kugula talin karnaa qaar ka mid ah App khuseeya oo aan bilaash uga heli karno Google Play Store. Haddii aadan wali cadeyn talaabooyinkan inaad raacdo, waxaa jira codsi ah mid fudud oo aan la qaldin karin.
Dhaqaaq Xiriirada Transfer / kaabta
Haddii wareejinta xiriirada ka iPhone hore aad casriga cusub ee Android waa dhibaato, joojiso walwalka. Marka taas bilowga Android-kaaga ha ku bilaabin cagta qaldan Waxaan dooranay codsi kadib markaad isticmaasho aanad ka waaban doonin inaad ku taliso. In ka yar hal daqiiqo waxaad arki doontaa sida xiriiradaadu uga kala socdaan hal aalad una socdaan qalab kale adigoon wax isku murgin.
Haddii aad ka timid macruufka ama haddii aad cusboonaysiiso qalab oo aad rabto inaad ka soo kabato buuggaaga xiriirka tani waa codsiga ugu habboon. Nooc dhowaan la cusbooneysiiyay iyo qiimeyn 4,8 oo ku taal Play Store ayaa ka horreeyay. Y waayo-aragnimada ah in la isticmaalo dhowr jeer ayaa xaqiijineysa waxqabadkeeda wanaagsan.
Waa inaan Ku soo dejiso App-ka iPhone-ka iyo waliba qalabka cusub. Waxaan ka helnaa astaanteeda labada taleefan isla waqtigaas. Annaga oo tixgelinayna waa inaan ay ku shaqeyso Bluetooth. Telefoonkeena cusub waxaan ku dooran doonaa ikhtiyaarka «xiriirada soo dejinta qalab kale». Abka laftiisa ayaa la socon doona aaladaha Bluetooth-ka ee dhow. Markaan aragno magaca qalabkii hore shaashadda, kaliya waa inaan dooranaa adigoo gujinaya astaanta u muuqata magaceeda.
Waxaan dooran doonaa, kiiskan, iPhone kaas oo aan dooneyno inaan ka soo dhoofino xiriirada. Lagama maarmaan sii oggolaanshaha barnaamijka loo baahan yahay si aad u heli karto xogta kalandarka. Marka aan sidan yeelno, buugga taleefanku wuxuu bilaabi doonaa inuu ka soo guuriyo aaladdii hore kan cusub. Waxa kaliya oo haray ah in lagu oggolaado rukhsadda qalabka cusub si loo helo xogta la soo dejiyey ee ku jirta buugga xiriirka. Y isla markiiba waxaan ku raaxeysan karnaa dhammaan xiriiradayada taleefanka cusub. Taasi way fududahay.
Hadda, mar dambe uma adeegsan karno cudurdaar ah in aanaan beddelin nidaamka qalliinka sababo la xiriira dhibaatada wareejinta xogteenna hal madal oo kale. Thanks to codsiyadaan waxaan awoodi doonnaa inaan helno dhammaan faylalkayaga, sawirradeenna iyo xiriiradayada iyadoo loo marayo tallaabooyin aad u fudud.
Waxaad hadda diyaar u tahay inaad naftaada ku quusto adduunka Android
Maanta Waxaan si faahfaahsan u sharaxnay sida si buuxda loogu galo nidaamka deegaanka ee mobilada Google. Laga bilaabo xilligan xaadirka ah Android mar hore ayey qayb ka noqon kartaa noloshaada. Si habboon loo qaabeeyey, taleefannada casriga ahi waxay isu beddelaan "kordhin" waxtar u leh nafteena. Iyo ka fog in aan caqabad ku noqon cilaaqaadkeena shaqsiyeed, iyadoo si sax ah loo isticmaalo, waxay naga caawin kartaa siyaabo badan.
Haddii aad ka shakiday bilawga inaad go'aamineyso inta udhaxeysa macruufka ama Android waxaan kuu sheegayaa in muddo kadib, iyo in ka badan iyo in ka badanba, labada nidaam ee hawlgalku ay aad isugu egyihiin midba midka kale. Mabda 'ahaan waxaan dhihi karnaa labadoodaba waxay u adeegaan si isku mid ah, waxayna ku shaqeeyaan hal fikrad. Midkoodna iyo kan kaleba waxay ku tiirsan yihiin dukaan codsi oo dhameystira adeegyada aasaasiga ah ee ay bixiyaan.
In Android ay maamusho inay ka soo baxdo inta kale waxaa u sabab ah qaar ka mid ah duruufaha muhiimka ah. Nidaam qalliin oo leh maskax furan dhan walba. Barnaamijkeeda bilaashka ah waa mid ka mid ah hantideeda ugu weyn. Helitaanka horumarinta arjiga iyada oo aan loo baahnayn rukhsado qaali ah. Iyo suurtagalnimada haysashada qaabab badan oo badan iyo fursado u habeyn. Waxaa loo maleynayaa, ma jiri doonaan wax aad ku waayi karto Android-ka nidaamyada kale ee hawlgalka.
Haddii aadan bilow aheyn, waxaad ka heli kartaa hagahan mid aad aasaasi u ah. In kasta oo ay tani ahayd dhammaadka runta ee abuuritaankeeda. Ka caawi kuwa duruufaha jira awgood ama aan awoodin illaa iyo hadda inay helaan teknoolojiyada cusub ee moobiilka. Hagaheena ma ku anfacay adiga? Waxaan rajeyneynaa inaan kaa caawinay inaad casrigaaga cusub ka dhigto mid shaqeynaya sida ugu macquulsan. Hadda waa inaad ku raaxeysataa khibrada Android si buuxda, nasiib wacan!
Hadana haddii aad wax shaki ah qabtid ama ay jiraan wax aadan aqoon sida loo sameeyo, nooga tag faallooyin waana ku caawin doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Buug-gacmeedka Android, hagaha aasaasiga ah ee bilowga ah
Buugaagtii ugu dhammaystirka badnaa ilaa maanta! Aad loogu taliyay!
Maqaal aad u wanaagsan. Had iyo jeer waxaa loo qaataa iyadoo la ogol yahay in dadka oo dhami ay ku cad yihiin fikradaha aasaasiga ah qaarkood
Ku jawaab Xabin
Farriin weyn !! Waa inay ku daraan baakadka markii aad iibsaneysid taleefan cusub si wax walba loo xakameeyo.
Ku jawaab Nagore
Tabaruc aad u fiican. Aad baad u mahadsantahay
Waa buug-gacmeedka ugu dhammaystiran, cad, kooban oo wax ku ool ah ee aan arkay illaa maanta.
Waxay ka duwan tahay maqnaanshaha ceebta ah ee buugga (oo lagu beddelay buug yar oo fudud) inta badan taleefannada gacanta ee ugu dambeeyay. Waa in la mamnuuco oo la ciqaabo.
By the way, tusaale ahaan buugaag la'aanta ku jirta boosteejada ANDROID:
Sidee loo QARiyaa nambarkeyga markaan wacaayo XIAMI MI A2 iyo A1 oo wata Android 8.1?
Aad baan u quussanahay maxaa yeelay MA AAN ka heli karo qaabeynta ama Buugga AAN JIRAN mana aha khaladka hawlwadeenka, oo aan horeyba u wacay.
Waad ku mahadsan tahay horay inaad ii caawisay